I-Akhawunti yeNkcazo Eyona Ngcono, ii-Akhawunti zezoRhwebo zoRhwebi kunye neFXCC
I-akhawunti ye-akhawunti ye-Forex Trading
Ikhaya / Trading / Akhawunti / Akhawunti yeCandelo
Izicelo zee-akhawunti ze-Forex Trading Accounts kufuneka zingeniswe xa iNkampani yomThetho okanye yoBhaliso ihlose ukuvula i-akhawunti.
Ifomu yeFomu ye-Akhawunti ye-Akhawunti uza kufumana iindawo ezilungiselelwe ukunikezela ummeli ogunyazisiweyo, ukuthengisa, ukufaka idiphozithi okanye ukuhoxisa egameni lomenzi wesicelo.
Ukuvula i-Akhawunti yokuThengisa ibhizinisi kunye neFXCC yinkqubo ecacileyo:
Ndiyacela khuphela kwaye u gcwalise maxwebhu alandelayo:
I-akhawunti yokuvula imibuzo Isayinini seSignin Specimen Amandla akhethekileyo aMagqwetha IsiBongo soLawulo lwaBalawuli
Gcwalisa u buyele ezi zinto kunye nolwazi oluxhasayo oluceliwe kwiFXCC, nokuba ngefeksi okanye i-imeyile.
Ifeksi: + 44 203 150 1475
Emva kokuba isicelo sakho se-akhawunti senziwe kwaye senziwe, iinkcukacha zakho zokungena ziya kuthunyelwa kuwe kwisebe le-akhawunti ye-FXCC.
Nceda uqinisekise ukuba ufunde kwaye uqonda amaxwebhu alandelayo: